GoldRush EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်GoldRush EA ၏
GoldRush EA ၏ မတည်ငြိမ်မှု breakout အပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး နေ့စဉ်အချိန်ဇယားအပေါ်လတ်တလောထောက်ခံမှု / ခုခံအဆင့်ဆင့်အပေါ်ဆိုင်းငံ့အမိန့်အားမရသဖြင့်အရောင်းအ။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, ငါသည်အမြင့်မား EET စံတော်ချိန်အပေါ် Forex ပွဲစားများအကြံပြုပါသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးကုန်သွယ်သီတင်းပတ်အတွင်းငါးပြည့်စုံနေ့စဉ်ဖယောင်းတိုင်ပေးပါ။
GoldRush EA - ထူးခြားချက်များ
martingale သို့မဟုတ် martingale ဒြပ်စင်အဘယ်သူမျှမ
မတည်ငြိမ်မှု၏ filter; ယုတ်-ပြောင်းပြန် filter ကို
ကုန်သွယ်ရေးအမြဲဘားပိတ်ပွဲအပေါ်အချိန်-stop / ရပ်နား-အရှုံး / ရပ်တန့်နှင့်အတူကာကွယ်ထားကြသည်
TIMEFRAME - M30 ။ ငွေကြေး: ရွှေ (XAUUSD)။ အဆိုပါ EA ၏အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်တိုင်းကို tick အားဖြင့် backtested စေနိုင်ပါတယ်။
UseMM_Balance - သိုက်ငွေကြေးတန်ဖိုး။ ဒီတန်ဖိုး (0 ထံမှဆိုလိုသည်မှာကွဲပြားခြားနားသော) သတ်မှတ်ထားလျှင်, ထို့နောက်ကုန်သွယ်တွေအများကြီးသိုက်၏အသီးအသီးစိတျအပိုငျး UseMM_Balance နှုန်းတွက်ချက်သည်။0ဟုသတ်မှတ်လျှင်ကုန်သွယ်အများကြီးအရွယ်အစား fixed နှင့် = အများကြီး။ ဥပမာအားဖြင့်, အကယ်. စာရေး= 0.1 နှင့် UseMM_Balance = 300, သိုက် 300 ဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, EA ၏ 0.1 တွေအများကြီးတစ်ခုအလို့ငှာဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ကို၎င်း, သိုက် 600 အခါ - သိုက် 0.2 သောအခါ 900 တွေအများကြီး - 0.3 တွေအများကြီး, etc ဒီ parameter သည် reinvestment လိုအပ်နေသည် ။
EET_offset - eet ချိန်ညှိ offset ။ ကုန်သွယ်ရေးရက်သတ္တပတ် (တနင်္လာနေ့… .. သောကြာနေ့) တွင်ပြီးပြည့်စုံသောနေ့စဉ်ဖယောင်းတိုင်ငါးခုကိုပြသသည့် EET (GMT + 2winter / GMT + 3summer) အချိန်ဇုန်သည်ပွဲစားများအတွက်ဤတန်ဖိုးကို0ဟုသတ်မှတ်သည်။ အခြားပွဲစားများအတွက်သင်သတ်မှတ်ရမည် eet (-23 ... .23) offset ။ ဥပမာအားဖြင့်, များအတွက် ပှဲစား CET အပေါ် (GMT + 1winter / GMT + 2summer) စံတော်ချိန် EET_offset = -1.
TakeProfit% ofPrice - entry ကိုစျေးနှုန်း၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက်အမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်။
StopLoss% ofPrice - entry ကိုစျေးနှုန်း၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက် max ကိုရပ်တန့်-အရှုံး။
MagicNumber - တမူထူးခြားတဲ့ ID EA ရဲ့အမိန့်သည်။